प्रचण्ड मुम्बई गएको मौकामा चौका हान्न प्रधानमन्त्री ओलीले बनाए यस्तो मास्टरप्लान, के गर्लान नेपाल र खनाल ? — Imandarmedia.com
प्रचण्ड मुम्बई गएको मौकामा चौका हान्न प्रधानमन्त्री ओलीले बनाए यस्तो मास्टरप्लान, के गर्लान नेपाल र खनाल ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गएको मौकामा चौका हान्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा जति नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुलाई गालीगलौज गरेर उडाए पनि नेकपा विभाजन भएकोमा ओली निकै निराश र खिन्न रहेको उनी निकट नेता बताउछन् ।
खासगरी पूर्वएमालेको ठूलो पंक्तिले आफूलाई छाडेपछि ओलीमा चिन्ता बढेको हो । पार्टीका युवा नेता र तटस्थ बस्दै आएका नेताहरूले पूर्वएमालेलाई फर्काउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएपछि बालुवाटारले नयाँ मास्टर प्लान बनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि भारत गएको मौका पारी बालुवाटारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको हो । त्यसको संकेत सोमबार नै देखिइसकेको छ ।
ओली निकट नेताहरु ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेलले क्रमशः सिरहा र चितवनमा पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरुको मात्र आलोचना गरेको, पूर्वएमाले पक्षका नेताहरूबारे उच्चारणसमेत गरेनन् ।
ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गरे र निर्वाचन स्वीकार पार्टी एक हुने घोषणा गरे । अर्कोतर्फ चितवनमा शंकर पोखरेलले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नकै लागि प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको खुलासा गरे ।
उनले प्रचण्डकै कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै पूर्वएमाले नेताहरुबारे केही भनेनन् । बालुवाटारलाई यो कदम चाल्न वामदेव गौतमले भित्रभित्रै खेलिरहेको बुझिएको छ ।
हिजोमात्रै अहिलेसम्म तटस्थ देखिएका बामदेवले प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग २ घण्टा छलफल गरेका छन् । वामदेव र प्रधानमन्त्रीबीचको कुराकानी कुन बिषयमा केनि्द्रत थियो त्यो भने खुलाइएको छैन् ।
स्रोतका अनुसार बालुवाटारले अहिले प्रचण्डतिर लागेका पूर्वएमाले पक्षका नेतालाई फकाउने नीति अख्तियार गरेको छ । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेतालाई आफूतिर तान्न सके पूर्वमाओवादी पक्षका नेता मात्रै चोइटिने, त्यसलाई आफ्नो पक्षलाई खासै फरक नपर्ने बालुवाटारको बुझाई छ ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को फुटको प्रभाव ६ वटा प्रदेशका सरकारमा देखापरे पनि प्रदेश २ सरकारमा त्यसको कुनै प्रभाव छैन् । कारण, यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ भने नेकपा प्रतिपक्षीमा ।
मंगलबार भने प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा नेकपा फुटको असर देखापर्‍यो । एक पक्ष कार्यकर्ता भेला गरिरहेका थिए भने अर्काे पक्ष संसदीय दलको नेता हटाउन बैठक ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरु जनकपुरधामस्थित पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता भेला गरिरहँदा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदहरु प्रदेशसभाभित्र रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसे ।
कार्यकर्ता भेलामा ओली पक्षीय नेताहरुले प्रचण्ड-माधव समूहलाई विभिन्न आरोप लगाइरहँदा प्रचण्ड-माधव समूहले ओली पक्षका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई नै हटाए । र, शत्रुघन महतोलाई दलको नेता चुने ।
प्रमद्वारा प्रदेशसभा विघटनको धम्की
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरू तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेशसभा विघटन तथा प्रदेश सरकार खारेजको सम्भावनाबारे लगातार अभिव्यक्ति दिएका छन् । संसद विघटनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि प्रदेश सरकार हेरफेर भए आफूले थप कदम चाल्ने संकेत गरेका थिए ।
के प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशसभा विघटनको तयारीमा छन् ? आफैंले गरेको संकेत, संघीय मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति र निकट नेताहरुको सुझावलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह प्रदेशमा दुई महत्वपूर्ण रणनीतिसहित अगाडि बढेको छ ।
ओली निकट स्रोत भन्छ, ‘पहिलो चरणमा प्रदेशका सरकार बचाउने कोसिस हुन्छ । यदि आफूनिकट मुख्यमन्त्रीहरुको पद धरापमा पर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो चरणमा संविधानलाई नै देखाएर प्रदेश सरकार विघटन गर्न सक्छन् ।’ प्रदेशसभा विघटनभन्दा पहिले आफ्नो अनुकूल समीकरण बनाउने ओलीको रणनीति छ ।
मन्त्रीहरुका लगातारका अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारहरुको भविष्यलाई लिएर पनि अनेकौं प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रदेशसभा रहने वा विघटन गर्ने सम्बन्धमा सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।
‘हाम्रो (ओली समूहको) स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । त्यहाँबाट आवश्यक निर्णय हुन्छ । प्रदेशमा सत्ता साझेदार, प्रदेश सरकार फेरबदल विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ । उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) समूह कसरी आउँछ, त्यसैअनुसार निर्णय लिन्छौं,’ मन्त्री भट्टले सोमबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीका दुवै रणनीतितर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए ।
सोमबार नै विराटनगरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको बताएकी थिइन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
ओलीलाई निकट नेताहरुको पनि सबै विकल्पमा अगाडि बढ्न सुझाव छ । केही दिनअघि नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि अर्को पक्षको कदम हेरेर प्रधानमन्त्रीले थप कदम चाल्ने बताएका थिए ।
ओलीनिकट नेतृ निरु पालले त सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता नै खारेज गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । उनको भनाइ थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५ केन्द्र को मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस् नेपाली जनताको मनमस्तिस्कमा सधै बस्नुहुनेछ । मेरो ब्यक्तिगत विचार ।’
उता दाहाल–नेपाल निकट नेताहरूले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने सकिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिलाई प्रतिगामी सोच भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुले ओली संघीयताविरोधी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘अहिले केपी ओली प्रतिगमन, पश्चगमन, प्रतिक्रान्ति, गणतन्त्रविरोधी, संघीयता विरोधीको प्रतिनिधि हुनु भएको छ । हामी अहिले कानुनी, राजनीतिक र सडक संघर्षको लडाइँमा छौँ । यो बढ्दै जाँदा प्रदेश खारेज गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने, यसले प्रतिगमन कसिँदै जाने हो, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै जाने हो,’ मंगलबार बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वमन्त्री एवं नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘…उहाँ नजिककाले छिटफुट रूपमा संघीयता खारेज गरेर लोकप्रिय हुने हो भनेका छन्, कसैले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरे राष्ट्रनायक भइन्छ भनेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री आफैंले प्रदेशसभा विघटनको कदम चाल्न सक्ने संकेत पुस ८ मा दिएका थिए । एक टीभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’
त्यसअघि कात्तिक १ मा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पार्टी नेताहरुसँग ओलीले प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबिना प्रदेशले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने बताएका थिए ।
उता नेकपा–दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रतिगमन र अग्रगमन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीच वैचारिक संघर्ष छ । प्रतिगमनकारीले संघीयता खारेज गर्छु भन्नु कुनै नौलो कुरा भएन ।’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा उत्रेको छ ।
संविधानको धारा २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’
संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । तर, अहिले संसद विघटनको अवस्थामा छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा प्रदेशसभा विघटन हुने स्वाभाविक प्रक्रिया छ । विभिन्न पाँच उपक्रम सफल नभए छैटौँ विकल्पमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
ओलीनिकट मुख्यमन्त्री कति जोखिममा ?
पार्टी विभाजनसँगै प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलका समीकरण सुरु भएका छन् । हाल चारवटा प्रदेशमा ओलीनिकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । ओलीनिकट चार मुख्यमन्त्रीमाथि दाहाल नेपाल समूहको नजर छ । त्यहाँ अहिले सरकार बचाउने र ढाल्ने चलखेल सुरु भएको छ । संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्नेक्रम पनि जारी छ ।
वाग्मती र प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता अगाडि तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश १ मा भीम आचार्य र वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका छन् । प्रदेश १ मा ७ माघमा प्रदेशसभा बैठक आह्‍वान भएको छ । वाग्मती प्रदेशमा पनि माघ ७ का लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन ।
पछिल्लो समीकरणमा यी दुवै मुख्यमन्त्री सुरक्षित ‘जोन’ मा रहेको मानिएको छ । उता कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा दाहाल–नेपाल निकट मुख्यमन्त्री छन् । अहिलेसम्म उनीहरु सुरक्षित छन् ।
ती दुवै प्रदेशमा ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन । नेकपा विभाजन नहुँदै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास भएको थियो । तर, रातारात बदलिएको समीकरणपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो ।
ओली पक्षको भेला-र्‍यालीदेखि नाचगानसम्म
ओली पक्षले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंगलबार जनकपुरधाममा र्‍याली गर्दै कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्याे । यसका निम्ति धनुषाको गाउँ-गाउँबाट सर्वसाधारणलाई जनकपुरधाम ल्याइयो । कार्यक्रम दिउँसो १ बजेदेखि निर्धारण गरिए पनि बिहानैदेखि ट्याक्टर, बस, मोटरसाइकलमा ओली पक्षीय नेताहरुले कार्यकर्ता ओसार्ने काम गरेका थिए ।
कार्यकर्ताको भीड जम्मा भएपछि रेल्बे स्टेशनबाट ओली पक्षमा नारा लगाउँदै निकालिएको र्‍याली पार्टी कार्यालय मिथिला भवनमा पुगेको थियो । जहाँ कार्यकर्ता भेलाको मञ्चीय कार्यक्रम गर्दा पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ, मन्त्रीहरु प्रभु साह, लिलानाथ श्रेष्ठ र जुली महतो, प्रदेशका इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सचिव सुमनराज प्याकुरेलसहितकाले सम्बोधन गरे ।
नेताहरुले भाषण गरिरहँदा कार्यकर्तालाई मनोरञ्ज दिन बीच-बीचमा गीत र नृत्यसमेत प्रस्तुत गरियो । पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणमा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको थियो । तर कार्यकर्ताको संख्या बढी भएपछि कार्यालय भवनको छतमासमेत बसेर कार्यकर्ताले भाषण सुन्नुका साथै गीत र नृत्यको समेत मनोरञ्जन लिएका छन् ।
ओली पक्षको कार्यक्रममा आंकलन गरिएको भन्दा बढी भीड देखिँदा नेताहरु खुशी देखिन्थे । कार्यकर्ता ओसार्ने काम नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय नेताहरुलाई दिइएको थियो । उनीहरुले विभिन्न सबारी साधनको प्रयोग गरी कार्यकर्तलाई जनकपुरधाम ल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा नेताहरुले मैथिली भाषालाई प्राथमिकता दिएका छन् । उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ पहाडी समुदायका भए पनि मैथिलीमै भाषण दिए । अन्य ठाउँमा राष्ट्रिय भाषामा भाषण दिदैं आए पनि रघुवीर महासेठ, जुली महासेठले पनि यहाँ मैथिलीमै बोले ।
‘भारतले नाकाबन्दी लगाउन सक्दैन’
कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले अब भारतले नाकाबन्दी गर्न नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग नयाँ सम्झौता गरेर भारतसँगको निर्भरतालाई हटाएको उनीहरुले बताए ।
‘भारतसँग निर्भरता रहँदा नाकाबन्दी सहनुपर्‍थ्यो’ पोखरेलले भने, ‘भारतसँग पारवहन सुविधा लियौं तर चीनसँगको बाटो पनि चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ सम्झौता गर्नुभएको छ ।’ उनले अब देशमा नाकाबन्दी हुने समय गइसकेको बताउँदै अब देशमा कहिले पनि नाकाबन्दी नहुने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले अब भारतले नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने बताए । ‘पहिलोपटक चीनसँग ४ वटा समुन्द्री र ६ वटा स्थल बाटो गरेर व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘अब नाकाबन्दी हुँदैन् ।’ ओली समूहले कार्यकर्ता भेला गरेको पार्टी कार्यालयमा १६ पुसमा प्रचण्ड-माधव समूहले कार्यकर्ता भेला गरेका थिए ।
कार्यकर्ता भेला गर्दै प्रचण्ड-माधव समूहले यो पार्टी कार्यालय आफूहरुकै भएको बताएका थिए । ओली पक्षले यहीँ कार्यालयमा कार्यकर्ता भेला गर्ने बताएपछि प्रचण्ड-माधव समूहले यहाँ हुन नदिने बताएका थिए । तर, मंगलबार उक्त समूह पछि हटेका छन् ।
फरार अभियुक्तलाई उपप्रधानमन्त्रीले माला र अबीर लगाएपछि
नेपालमा आज कति थपिए कोरोना संक्रमित, यति धेरै जनाकाे मृत्यु
के वामदेव गौतमले साँच्चै ‘जसले अध्यक्ष दिन्छ, त्यही समूहमा जान्छु’ भनेकै हुन् ? यस्तो रहेछ यथार्थ
चितवनमा सनराइज बोर्डिङ स्कुलको बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुईजनाको मृत्यु
सिमानामा विवाद बढेलगत्तै मोदीले चीनबिरुद्ध चाले यस्तो कडा कदम, अब के गर्लान राष्ट्रपति सी ?
आफ्ना राजनीतिक गुरुको अचानक निधन भएपछि स्तब्ध बने प्रचण्ड, यस्तो छ कारण
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध फेरि दर्ता भयो अर्को मुद्दा, निवेदन पत्रसहित
ओलीले गरेको भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा संसद विघटन- नेता नेपाल
संसदलाई रङ्गीबिरङ्गी झाँकी देखाउने थलो बनाउनु हुन्न : ओली